စာမဖတ်ဘဲစာကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ ငါက Mac ပါ
၏ဆိုက်ရောက် iOS9ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်အသစ်တွေ iPhone 6S နှင့် 6S Plus ဤကိစ္စတွင်ကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထက်ပိုသောအားသာချက်ရှိသည် - အကယ်၍ သင့်တွင် iPhone အသစ်တစ်ခုရှိပါကသင်လုပ်နိုင်သည် သင်ဖတ်ပြီးကြောင်းပေးပို့သူမပါဘဲစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ပါ။
အသစ်ကအတူ iPhone 6s နှင့် 6s Plus များသင်ဖွင့်ထားလျှင်ပင်၊ မက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်ရှုခြင်း၏အတည်ပြုချက်ကို ပေးပို့သူသည်သူ၌ဖြစ်ပျက်ကြောင်းအမှန်အကန်မသိဘဲသင်လိုချင်သည့်အချိန်တွင်စာကိုဖတ်နိုင်သည်။ သို့မှသာသင်မည်သည့်အချိန်တွင်တုံ့ပြန်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်၊ မည်သူမျှမသိနိုင်တော့ပါ။ ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဟာ feature အသစ်ကိုပဲသုံးရမယ် 3D Touch ကို ဒါကိုကြည့်ဖို့ မက်ဆေ့ခ်ျကို.
ဒါဆိုမင်းလိုချင်ရင် ပေးပို့သူမသိဘဲမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါ, မက်ဆေ့ခ်ျ၏ preview ကိုအပေါ်အခိုင်အမာနှိပ်ပါ, ထိုသို့သူကတစ်ခုလုံးကိုပြသပေမယ့် app ကိုဖွင့်ခြင်းမရှိဘဲပြသလိမ့်မည် ပို့စ်များကို။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုစုပ်ယူလိုက်သောအခါသင်၏လက်ချောင်းကိုချီ။ စာသည်၎င်းကိုပေးပို့သူထံသို့မဖတ်ရသေးဘဲဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်။ စာသားကို“ တရားဝင်” ဖတ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီဟုသင်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ပင်ခိုင်မြဲပါလိမ့်မည်။ မက်ဆေ့ခ်ျကို.
လွယ်ကူတယ်ဆိုရင်ကော။ iPhone 3s နှင့် 6s Plus အသစ်တွေမှာ 6D Touch ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Apple ကဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သူတို့ကငါ့ကိုအသစ်သက်တမ်းတိုးစေချင်တယ်။ ရှင်းပြစရာမလိုဘဲအဖြေကိုနောက်ကျဖို့ဘယ်တော့မှမ is never ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » စာလက်ခံရရှိမှုကိုမပို့ဘဲစာတစ်စောင်ကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ
Apple Watch သည်ဆွစ်နာရီများရောင်းအားကျဆင်းရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်
Apple Pay ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်ထုတ်လိုက်ပြီ